Crop sary miaraka amin'ny Illustrator misy safidy isan-karazany | Famoronana an-tserasera
Crop sary miaraka amin'ny Illustrator
Rehefa miasa miaraka amin'ny sary ianao dia fantatrao fa mety tsy lavorary ireo alainao amin'ny Internet. Na ilay ataonao amin'ny findainao na koa fakan-tsary (raha tsy hoe maka sary ao anaty studio mifehy ny hazavana, ny jiro ary ny aloka ...) ianao. Raha ny tena izy, na dia ny fanaovana azy ireo any aza, ny matihanina dia mazotoa manohina azy ireo avy eo. Noho io antony io, raha ny amin'ny fampisehoana ireo sary ireo dia matetika mandalo fotoam-pivoriana "sheet metal and loko" izy ireo. Ary ny iray amin'ireo hetsika izay averimberina indrindra dia ny fanapahana sary ao amin'ny Illustrator. Fa hainao ve ny manao azy?
Raha nanontany tena foana ianao hoe ahoana no ataon'ny hafa manorata sary ao amin'ny Illustrator saingy mbola tsy afaka nianatra ianao, anio dia hamaha izany olana izany aminao izahay. Ary hataonay amin'ny fanomezana safidy roa samy hafa ianao mba hahafahanao misafidy izay maharesy lahatra anao indrindra na amin'ilay iray izay ahinao indrindra. Samy mora be ny mampihatra azy roa, ka mariho.
1 Crop sary miaraka amin'ny Illustrator sy ny saron-tava
2 Vakio mora foana ny sary miaraka amin'i Illustrator
3 Ahoana raha manapaka sary iray amin'ny sary iray no tadiaviko?
Crop sary miaraka amin'ny Illustrator sy ny saron-tava
Mandeha amin'ny safidy voalohany tianay hampianarina anao izahay. Izy io angamba no sarotra indrindra, fa raha ny marina Tsotra be ny mampihatra azy raha manaraka ireo dingana homenay anao ianao. Mba hanaovana izany, iray amin'ireo fitaovana ilaina ilainao ny saron-tava. Ao anaty Illustrator io ka tsy mila mampidina na inona na inona ianao. Izy io dia tompon'andraikitra amin'ny fakana ny teboka iray amin'ny sary ho lehibe indrindra ary manapaka ny zava-drehetra manodidina azy, mamela toerana mitovy saika manodidina azy.
Eny izao, ny dingana dia:
Sokafy ny programa sy ny sary tianao hamboarina.
Omeo ny endrika (io bokotra kely mamela anao hamorona endrika isan-karazany io, toy ny efa-joro, ny boribory, ny fitaovana ellipse, ny polygon, ny kintana ...) Afaka misafidy izay mety aminao indrindra ianao. Tsy maintsy apetrakao tsara eo amin'ny sary amin'ilay sary tadiavinao io sary io, izay rehetra ivelan'io sary io dia ho very ianao. Ohatra, raha manana sarin'ny tarehy ianao, ny zavatra mahazatra dia ny mampiditra ny lohanao, ary angamba ny ampahany amin'ny vozona sy ny soroka, fa tsy misy zavatra hafa.
Tadiavo tsara ilay sary. Ary ny tsy tokony hametrahanao azy tonga lafatra amin'ny voalohany, ny fitaovana dia ahafahanao manamboatra fanitsiana toa ny fananganana azy bebe kokoa, ny fampidinana azy na ny fanaovana azy ho kely kokoa aza. Mazava ho azy, raha te-hahazo izany dia mila tsindrio ny bokotra voafantina, raha tsy izany dia tsy ho tsara tarehy.
Hamarino tsara fa eo ambonin'ilay sary foana ny endrika. Ary manontany tena ianao hoe, inona izany? Eny, ao amin'ny menio misy sosona, ny zavatra azo antoka indrindra dia ny fanananao ny sarin'ny sarinao, ary avy eo misy sosona miaraka amin'ilay sary noforoninao. Eny, io sosona ny tarehimarika io dia tokony ho eo an-tampon'ny sary fa tsy eo ambaniny. Azo ovaina mora foana izy io amin'ny alàlan'ny totozy. Safidy iray hafa ny fisafidianana an'io endrika io ary tsindrio Object / mandrindra / ento eo aloha.
Andao hahena! Tonga ny fotoana hanombohana fanapahana ny sary. Mba hanaovana izany dia mila misafidy ny sosona miaraka amin'ny sary feno ianao. Ankehitriny, tsindrio Object / Clipping Mask / Mamorona. Ary hamorona ho azy ho azy ilay vokatra. Tsy misy zavatra hafa intsony!
Vakio mora foana ny sary miaraka amin'i Illustrator
Loharano: toro-hevitra amin'ny video
Ity fomba fanapahana sary manaraka ity dia mitovy tsotra kokoa noho ilay teo aloha, na dia tsy mamela anao hilalao amin'ireo endrika aza izy io. Izany hoe, hamela anao hamorona mahitsizoro na toradroa izy, fa tsy misy zavatra hafa. Azonao atao foana ny manambatra azy amin'ilay teo aloha.
Sokafy ny Illustrator sy ny sary tianao hamboarina.
Tondroy ny fitaovana "Selection" eo amin'ny baraovana hita ao amin'ny Illustrator. Izy io no bokotra voalohany hita eo ankavia.
Tsindrio ny sary (io dia hahazoana antoka fa voafantina izy io, fa raha manana an'io sary io ianao dia afaka mamonjy ny tenanao amin'ity dingana ity.
Ao amin'ny tontonana ambony dia hanana ny fitaovana "Crop Image" ianao. Tsindrio eo.
Mety hahazo fampitandremana ianao izao izay milaza hoe: “Rehefa voapaika ny rakitra iray, dia ampidirina ao ny kopian'ny voalohany. Ny rakitra urinal amin'ny toerana misy rohy dia tsy hisy fiantraikany. ' Tsy mila manahy ianao, tsindrio ny Ok ary dia izay. Raha tsy mahazo ny fampitandremana ianao dia tsy misy na inona na inona mitranga, fa tokony ho azonao antoka fa manana kopian'ny sary na sary tany am-boalohany ianao amin'izay mety hitranga.
Ho hitanao izao ilay sary voahodidin'ny sisiny tsy misy tohiny azonao sintonina, alao ho kely kokoa, sns. Amin'ity tranga ity dia mila manitsy ny sary tadiavinao ianao amin'ny efajoro na toradroa, satria io no ho tavela amin'ny sary. Hamafa avokoa izay rehetra ivelan'izany.
Rehefa vitanao ny tapaka dia mila tsindrio fotsiny ny bokotra Ampiharo eo an-tampony, na Enter.
Ary dia izay, hanana ny sary voapaika ianao ary vonona ny hamoaka na hampiasa azy amin'izay tianao. Ankehitriny, azonao atao koa ny manalefaka ny sisiny na mampiasa tarehimarika aza hanapahana zavatra hafa.
Ahoana raha manapaka sary iray amin'ny sary iray no tadiaviko?
Alao an-tsaina hoe manana sary tonga lafatra ianao. Saingy hita fa zavatra iray ihany no tadiavinao amin'io sary io, ny zavatra hafa rehetra tsy tadiavinao na ilainao. Raha ny cropping no jerena dia saika tsy azo atao ny manala ny ambadika rehetra raha tsy very ny ampahan'ny zavatra tadiavinao. Fa misy fomba hanatanterahana izany.
eto omenay anao ny dingana:
Sokafy ny Illustrator sy ny sary tadiavinao.
Miaraka amin'ny sary voafantina, kitiho ny fitaovana «Pen» eo amin'ny toolbar ankavia. Ankehitriny, ho lasa karazana penina ny fampianaranao.
Tsindrio ny teboka iray amin'ilay sary tianao hamboarina. Mazava ho azy, amin'ny teboka iray amin'ny contour (manoro hevitra anao izahay handao toerana kely hisorohana ny tsy fanapahana zavatra izay tsy tokony hataonao.
Ankehitriny, ianao dia tsy maintsy contour manodidina ny zavatra tianao hokapaina mandra-pahatonganao any amin'ny teboka fanombohana indray.
Farany, kitiho ny Object / Clipping Mask / Mamorona. Ary tokony hahazo ny sary tianao hamboarina ianao. Ary eny, mety mahita ny sasany any ambadika ianao, saingy ho kely dia kely izany, ary azonao atao ny manalefaka ilay drafitra ka tsy dia tsikaritra loatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Crop sary miaraka amin'ny Illustrator
Ahoana ny fomba hanaovana ny vokan'ny glitch amin'ny Photoshop, tsikelikely